Alaab -qeybiyeyaasha Saliidda Papaya, Soo -saarayaasha, Dhoofinta
Ku bood tusmada horraanta
Ku soo dhowow shirkadda Bolise Co., Limited.
Soo Bixinta Dhirta
Qaaciddada nafaqada ee OEM & ODM
Foomamka Cosmetics-ka ee OEM & ODM
Bixi alaabooyin gaar ah / OEM / ODM iyadoo loo eegayo shuruudahaaga saxda ah
Bogga ugu weyn >> Soo Bixinta Dhirta
[Magac kale] Saliid Abuurka Papaya
[Magaca Latin] Carica papaya L.
[Muuqaalka] Liinta Jaalaha ah ee Fudud
1. Waxtarka maqaarka: Biyo -gelinta iyo huurka, gaar ahaan kuwa maqaarka qalalan, gaboobay iyo xasaasiyadda;
2. Wax -ku -oolnimada hawlaha galmada ee aadanaha: Wanaajinta shahwada dhiciska ah iyo asynodia;
3. Wax ku oolnimada niyadda: Niyad -jabka ka -hortagga iyo neerfaha;
[ Isticmaalka ]
1. Waxaa loo isticmaalay alaabta saabuunta, gaar ahaan saabuunta gacanta lagu sameeyo
2. Waxay bixin kartaa ur wanaagsan, sidaa darteed waxaa si weyn loogu daraa cadarka
3. Waxyaabaha ku jira saabuunta
4. Si ballaaran loo isticmaalo duugista
5. Waxyaabaha ay ka kooban tahay alaabta daryeelka maqaarka
6. Wax lagu daro cuntada
Ku Saabsan Saliidda Papaya
Saliidda Papaya waxay leedahay tayo qallafsan, taasoo la micno ah inay leedahay nafaqo, qoyaan iyo saamayn biyo-ku-haynta iyadoo la joojinayo luminta biyaha epidermal-ka, maadaama ay tahay saliid jilicsan oo siman (emollient). Isticmaalka joogtada ah wuxuu maqaarka ka dhigaa mid jilicsan oo jilicsan. Waa saliid duugis aad u fiican sidoo kale waa saliid wanaagsan oo lagu daaweeyo finanka iyo dhibaatooyinka maqaarka ee yaryar. Saliidda babaygu si fiican bay u gashaa una qoysaa maqaarka. Waxay hodan ku tahay asiidh dufan oo lagama maarmaan ah waxaana loo adeegsan karaa qaab kasta oo loo baahan yahay qaboojinta iyo guryaha huurka. Papayasku waxay noqon karaan wakiilo dib -u -nooleyn weyn leh, waana sababta loogu isticmaalay qurxiyo badan.
Fadlan si xor ah u waayo: xigashada sheyga (qiimaha sheyga), COA (Shahaadada Falanqaynta), Dhiirrigelinta Iibka Cusub, Alaabooyinka Cusub, Iyo kaalmooyin kale.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan badeecada, fadlan u soo dir emaylka [emailka waa la ilaaliyay]
Ka dib markaad u dirto baaritaanka khadka tooska ah, waxaan kuugu soo jawaabi doonnaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, haddii aanad helin wax jawaab ah waqtigii loogu talagalay fadlan nala soo xiriir Tel ama Email.
E-MAIL:[emailka waa la ilaaliyay]
TEL: + 86 592 536 5868
Mob / WhatsApp / WeChat: +86 13696950872
Maamulaheena iibinta ee VP wuxuu leeyahay khibrad maamul 25 sano oo dhan dhamaan doorka hogaamineed.
Mob / WhatsApp / WeChat: +86 19859184872
Siry Tgly wuxuu mas'uul ka yahay dhammaan jiilka hoggaanka, adeegga macaamiisha, iyo howlaha suuqgeynta.
Mob / WhatsApp / WeChat: +86 18965157632
Amy Zeng ayaa mas'uul ka ah iibka adduunka, adeegga iyo ballaarinta kanaalka ee suuqa Yurub.
Mob / WhatsApp / WeChat: +86 18965162351
Daisy Chan waxay mas'uul ka tahay iibinta caalamiga ah, adeegga iyo ballaarinta kanaalka suuqa Yurub.
Qiimaha & COA
U sheeg: +86 592 536 5868
Ku dar: 299 Hudong Rd, Xiamen, Shiinaha.
Xuquuqda daabacaadda © Bolise Co., Xaddidan. www.bkherb.com All Rights Reserved Soo Bixinta Dhirta Midabada Cunnada Dabiiciga ah Ogeysiiska Cafiska Mas'uuliyadda
na soo raac,